Soomaali lagu xiray Italy | Baydhabo Online
Soomaali lagu xiray Italy
Nin u dhashay Dalka Jarmalka oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa lagu xiray Dalka Talyaaniga, kadib markii lagu eedeeyay Tahriibinta dad u dhashay wadanka Talyaaniga.
Ninkan oo habeenkii Arbacada lagu xiray Magaalada Milan ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Khaliif, waxaana lagu eedeeyay in 13 Qof oo u dhalatay Talyaaniga, uu Tahriib ahaan ku gelin rabay Waqooyiga Yurub.
Booliska Dalka Talyaaniga oo ninkan xiray ayaa sheegay in sidoo kale ay gacanta ku dhigeen 10 nin, kuwaas oo la socday ninka ay hada gacanta ku hayaan.
Waxa ay sheegeen ninkan in uu ka shaqeynayay shabakad dadka Tahriibisa, waxaana uu sameyn jiray warqado been abuur ah oo uu dadka ugu sheegayay in ay ku galayaan wadamada Germany, France ama Dalalka Scandinavian-ka.
Ugu dambeyntii Booliska Talyaaniga ayaa waxa ay sheegeen in ay Howlgallo kale ka wadaan Florence, Brescia, Bergamo iyo Catania, halkaas oo la sheegay in ay ku dhuumaaleysnayaan shabakado kale oo Muwaadiniinta Talyaaniga Tahriibiya.